War - Sidee loo doortaa bamka lagu shubo?
Markaad wax ka qabanaysid slurries, isticmaalayaashu had iyo jeer waa inay kala doortaan inta udhaxeysa caag-ka ama dhismaha birta bambooyinkooda. Jadwalka 1 ee gabagabada qodobkan wuxuu bixinayaa isbarbardhig kooban oo ku saabsan labada naqshadood.
Slurry waa dareere leh waxyaabo adag oo la joojiyay. Xakamaynta xoqitaanka waxay kuxirantahay adkaanshaha adkaanta, adkaanta, qaabka, iyo tamarta firfircoonida walxaha adag ee loo wareejiyo sagxadaha mashiinka. Dareemadu waxay noqon kartaa wax dahaadha iyo / ama viso. Adkaadaha waxaa ka mid noqon kara ganaaxyo qayb yar ama waxyaabo waaweyn oo adag oo had iyo jeer qaab aan caadi ahayn iyo qaybin ah.
Go'aaminta goorta la isticmaalayo bamka laba-cirifoodka leh wuxuu noqon karaa go'aan adag. Badanaa qiimaha makiinada wax lagu shubo ayaa marar badan ka badan tan caadiga ah ee matoorka tanina waxay ka dhigi kartaa go'aanka isticmaalka makiinada wax lagu shubo mid aad u adag. Hal dhibaato oo ah xulashada nooca bamka ayaa ah go'aaminta in dareeraha la soo saarayo iyo in kale uu yahay mid si dhib yar ku socda. Waxaan u qeexi karnaa slurry sida dheecaan kasta oo ka kooban adag oo ka badan kan biyaha la cabi karo. Hadda, tani macnaheedu maahan in bamka lagu shubo waa in loo adeegsadaa codsi kasta oo leh xaddi adag oo adag, laakiin ugu yaraan bamka lagu shubo waa in la tixgeliyaa.
Bamgareynta tuubada qaabkeeda ugu fudud waxaa loo qeybin karaa seddex qaybood: nal, dhexdhexaad iyo culus culus. Guud ahaan, slurries light waa slurries aan loogu talagalin inay qaadaan cunnooyinka adag. Joogitaanka walxaha adag waxay ku dhacaan si kadis ah marka loo eego naqshadeynta. Dhinaca kale, slurries culus waa slurries loogu talagalay in alaabada hal meel looga qaado loona wareejiyo meel kale. Badanaa dheecaanka qaada xammuulka culus waa shar shar ah oo lagama maarmaan u ah ka caawinta qaadista waxyaabaha la doonayo. Dhex-dhexaadinta dhexdhexaadku waa mid ku dhacda meel u dhexeysa. Guud ahaan, Boqolleyda adag ee dhexdhexaadka dhexdhexaadku waxay u dhexeeyaan 5% ilaa 20% culeys ahaan.
Ka dib go'aan ka gaarista haddii aad la macaamileyso culus, dhexdhexaad, ama qulqulatid fudud, waxaa la joogaa markaa waqtigii la jaanqaadi lahaa mashiinka dalabka. Hoos waxaa ku yaal liiska guud ee astaamaha kala geddisan ee iftiinka, dhexdhexaadka, iyo culeyska culus.
Astaamaha Sifir Fudud:
Joogitaanka adkaha ah ugu horreyntii waa shil
Size Qiyaasta adag ee adag <200 micron
Ur Daloolin aan deggenayn
Gra Cuf culeyska gaarka ah ee slurry <1.05
● Culeys ka yar 5%
Astaamaha Dhexdhexaad Dhexdhexaad:
Size Cabirka adag 200 mitirroone ilaa 1/4 inji (6.4mm)
Ur Dajinta ama degganaan la'aanta dejinta
Gra Cuf cufnaanta gaarka ah ee slurry <1.15
5% ilaa 20% culeys ahaan culeys ahaan
Astaamaha Dabacsan ee Culus:
Ujeedada ugu weyn ee Slurry waa in la qaado waxyaalaha
● Cunnooyinka adag> 1/4 inji (6.4mm)
Gra Cuf cufnaanta gaarka ah ee slurry> 1.15
● Culeys ahaan in kabadan 20%
Liiskii hore waa damaca hagitaan deg deg ah si looga caawiyo kala soocida codsiyada kala duwan ee bamka. Tixgelinnada kale ee u baahan in wax laga qabto marka la dooranayo qaabka bamka ayaa ah:
Hard Qalalan adag
● Qaab dhismeed
Size Cabbirka walxaha
Loc Xawaaraha xawaaraha iyo jihada
Density Cufnaanta walxaha
Ness Jidh jilicsanaanta
Nakhshadeeyayaasha bambooyin qulqulaya ayaa tixgeliyey dhammaan arrimaha kor ku xusan waxayna qorsheeyeen bambooyin si ay u siiyaan qofka isticmaala dhamaadka nolosha ugu badan ee laga filayo. Nasiib darrose, waxaa jira waxoogaa tanaasullo ah oo loo sameeyay si loo helo nolol bamka la aqbali karo. Shaxda gaaban ee soo socota waxay muujineysaa muuqaalka naqshadeynta, faa iidada, iyo isu tanaasulka bamka qulqulaya.